OTU ESI AGBANYE NA ANDROID N'ENWEGHỊ BỌTỊNỤ IKE - A GAM AKPORO - 2019
Gbanyụọ gam akporo ngwaọrụ na-enweghị bọtịnụ ike
Tinye faịlụ ọdịyo na slide dị ka ndị a.
Mbụ ị chọrọ ịbanye na taabụ "Tinye".
Na okpu, na njedebe bụ bọtịnụ "Ụda". Ya mere o choro igbakwunye faịlụ egwu.
Na PowerPoint 2016, enwere nhọrọ abụọ iji gbakwunye. Nke mbụ bụ nanị ịtinye mgbasa ozi site na kọmputa. Nke abụọ bụ ndekọ dị mma. Anyị ga-achọ nhọrọ mbụ.
Achọpụta ihe nchọgharị na-emepe, ebe ịchọrọ ịchọta faịlụ achọrọ na kọmputa gị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agbakwunye ụda ahụ. Mgbe mgbe, ọ bụrụ na e nwere ebe maka ọdịnaya, egwu ahụ nwere oghere a. Ọ bụrụ na enweghị ebe, ntinye ahụ bụ nanị n'etiti etiti slide ahụ. Ihe mgbasa ozi agbakwunyere dị ka ọkà okwu nke nwere ụda sitere na ya. Ịhọrọ faịlụ a ga-emepe ọkpụkpọ obere ka ị gee egwu.
N'oge a, mgbakwunye nke ọdịyo zuru ezu. Otú ọ dị, nanị ịtinye egwú bụ ọkara agha ahụ. Nye ya, mgbe niile, a ghaghị ịhọpụta, nke bụ kpọmkwem ihe a ga-eme.
Ịtọ ụda maka izugbe
Maka nmalite, ọ bara uru iji tụlee ọrụ nke ụda dịka ihe nkwado egwu na ihe ngosi.
Mgbe ị na-ahọrọ egwu agbakwunyere, ọnyà ọhụrụ abụọ na-apụta na nkụnye eji isi mee na nkụnye eji isi mee, gbakọtara ọnụ "Na-arụ ọrụ na ụda". Anyị anaghị achọ nke mbụ; ọ na-enye anyị ohere ịgbanwe ọdịdị anya nke ọdịyo ọdịyo - nke a bụ ọkà okwu n'onwe ya. N'ọkwado ndị ọkachamara, anaghị egosipụta foto ahụ na slides, ya mere, ọ dịghị ezi uche ịhazi ya. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike igwu ebe a.
Anyị nwekwara mmasị na taabụ ahụ "Playback". Lee ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ebe.
"Lee" - mpaghara mbụ nke na-agụnye naanị otu bọtịnụ. Ọ na-enye gị ohere ịkpọ ụda ahọrọ.
"Akwụkwọ edokwubara" Ha nwere bọtịnụ abụọ maka ịgbakwunye ma wepu arịlịka pụrụ iche na teepu akụrụngwa egwu, iji nwee ike ịmegharị egwu. N'oge nlọghachi, onye ọrụ ga-enwe ike ịchịkwa ụda na ọnọdụ ngosi ngosi, na-agbanye site n'otu oge gaa na nchịkọta isi ọkụ ọzọ:
Ọzọ tab - "Alt" + "Ọgwụgwụ";
Nke gara aga - "Alt" + "Home".
Na-edezi na-enye gị ohere ihichapụ akụkụ dị iche iche nke faịlụ faịlụ na-enweghị ndị editọ dị iche. Dị ka ihe atụ, nke a bara uru, dịka ọmụmaatụ, na ikpe ebe a na-achọrọ egwu ịtinye egwu iji kpọọ amaokwu. A na-ahazi nke a na window dị iche, nke a na-akpọ site na bọtịnụ. "Echichi ụda". N'ebe a, ị nwekwara ike idebanye oge oge mgbe ọdịyo ga-apụ n'anya ma ọ bụ pụta, wedata ma ọ bụ ịba ụda olu, n'otu n'otu.
"Nhọrọ ụda" nwere akụkụ nke isi maka ọdịyo: olu, usoro nke ngwa na ntọala maka mmalite nke ọkpụkpọ.
Ụda ụda - ndị a bụ bọtịnụ dị iche abụọ na-enye gị ohere ịhapụ ụda ka ọ na-etinye ya ("Ejila eji"), ma ọ bụ na-agbanwe ya dị ka egwu ndabere ("Play Back").
A na-etinye mgbanwe niile na echekwa na-akpaghị aka.
Na-adabere na ngwa ngwa nke ihe a na-edebere. Ọ bụrụ na nke a bụ naanị ụda olu, wee pịa bọtịnụ. "Play Back". Iji aka, a na-ahazi ya dị ka ndị a:
Tinye akara na njedebe "Maka ihe ngosi niile" (egwu agaghị akwụsị mgbe ị na-agagharị na slide ọzọ) "Na-aga n'ihu" (faịlụ a ga-egwu ọzọ na njedebe) "Zoo mgbe igosi" na mpaghara "Nhọrọ ụda".
Ibid, na graph "Malite"họrọ "Akpaaka"nke mere na mmalite nke egwu adịghị achọ ikikere pụrụ iche site n'aka onye ọrụ ahụ, ma amalite ozugbo ọ malitere nlele.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a ga-egwuri egwu ọdịyo ahụ naanị mgbe nlele ahụ ruru na slide nke e debere ya. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ egwu maka nkwupụta niile ahụ, tinye ụda dị otú ahụ na ntinye mbụ.
Ọ bụrụ na eji ya maka nzube ndị ọzọ, ị nwere ike ịhapụ mmalite. "Pịa". Nke a bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta ihe ọ bụla (dịka ọmụmaatụ, ihe ngosi) na slide na ụda.
Banyere akụkụ ndị ọzọ, ọ dị mkpa iburu isi ihe abụọ bụ isi:
Nke mbụ, a na-atụ aro ka ị tinye akọrọ nso "Zoo mgbe igosi". Nke a ga-ezochi akara ngosi ọdịyo n'oge ngosi slide.
Nke abuo, ọ bụrụ na iji egwu na-eji egwu eme ihe, ị ga-agbarịrị anya ka ọ bụrụ na ụda ahụ amalite nke ọma. Ọ bụrụ na, mgbe ị na-elele, egwu niile na-ama ndị niile na-ekiri, mgbe ahụ site na ntaneti niile ha ga-echeta naanị oge a na-adịghị mma.
Ntọala ụda maka njikwa
A na-ahazi ụda maka bọtịnụ njikwa dị iche.
Iji mee nke a, ịkwesịrị iji aka nri pịa bọtịnụ achọrọ ma ọ bụ onyinyo ma họrọ mpaghara na menu ihe nkpa. "Hyperlink" ma ọ bụ "Dezie hyperlink".
Ogidi ntọala njikwa ga-emeghe. N'ebe dị ala bụ eserese nke na-enye gị ohere igbanwe ụda maka ojiji. Iji mee ka ọrụ ahụ rụọ ọrụ, ị ga-etinye akara ngosi kwesịrị ekwesị n'ihu amaokwu ahụ "Ụda".
Ugbu a ị nwere ike mepee nkwekọ nke ụda dị. Nhọrọ kachasị ọhụrụ bụ mgbe niile "Ụda ọzọ ...". Ịhọrọ ihe a ga-emeghe nchọgharị nke onye ọrụ nwere ike ịgbakwunye ụda achọrọ. Ozugbo agbakwunyere, enwere ike inye ya ka ịmepụta mgbe a na-agbanye bọtịnụ ahụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọrụ a na-arụ ọrụ na ụda na usoro .WAV. Ọ bụ ezie na n'ebe ahụ ị nwere ike ịhọrọ igosipụta faịlụ niile, usoro ọdịdị ndị ọzọ agaghị arụ ọrụ, usoro ahụ ga-eme ka ọ bụrụ na i mehiere. Ya mere, ịkwesịrị ịkwadebe faịlụ n'ọdịnihu.
N'ikpeazụ, ana m achọ ịtinye na ịtinye faịlụ ọkpụkpọ na-eme ka ọ dịkwuo ukwuu (ụda nke akwụkwọ ahụ na-eji). O di nkpa iburu nke a n'uche ma oburu na ihe obula di iche di.